Dibadbax looga soo horjeedo afgambigii dhicisoobay ee Turkiga oo ka socda Muqdisho – Radio Muqdisho
Banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo isku daygii fashilmay ee la doonayey in lagu afgambiyo dowlada sharciga ah ee dalka Turkiga ayaa saaka ka socda magaalada Muqdisho.
Dibadbaxa axaa ka qeyb galaya qeybaha kala duwan ee shacabka gobolka Banaadir, oo muujinaya sida ay uga xun yihiin isku daygaasi, iyo sida ay u taageersan yihiin dowladda sharciga ah ee dalka Turkiga.
Waxaa la filayaa in banaanbaxa ay ka qeyb galaan madax ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, si iyana ay shacabka ula qeybsadaan dareenkooda ku aaddan waxa ka dhacay dalka Turkiga.
Waxaa la arkayaa shacab badan oo sida calanka dalka Turkiga iyo sawirada madaxweyne Erdogan oo isugu soo baxay waddooyinka magaalada Muqdisho.
Dibadbaxayaasha ayaa ku soo uruuraya taalada Daljirka dahsoon halkaasoo la filayo iney kula hadlaan mas’uuliyin ka tirsan dowladda Federaalka.
Daawo Sawirrada: Shacabka Turkiga oo ka dhiidhiyay kana hortagay isku daygi ciidamada
Madaxweynaha oo Kigali kula kulmay kaaliyaha,xoghayaha Arimaha dibadda Maraykanka u qaabilsan Afrika